Sei mari yakavhenganiswa ichigona kuve imwe nzira yekudyara? | Ehupfumi Zvemari
Sei mari yakavhenganiswa ichigona kuve imwe nzira yekudyara?
Chimwe chezvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvaunogona kutenga panguva ino imari yekudyara. Asi iwe unofanirwa kuziva kuti ivo vane hunhu hwakakura, hwakawanda sezvo paine akawanda emari midziyo. Chero zvazvingaitika, imwe yeanonyanya kukanganikwa nevadiki uye vepakati varimi vanosanganiswa. Iyo yemhando yekudyara iyo sanganisa zviitiko zvakati wandei zvemari neumwe neumwe, zvese kubva kuemaiti uye mari yakatarwa, pasina kukanganwa dzimwe nzira kana nyowani dzemari. Mupfungwa iyi, ihomwe yakazara kwazvo inovhara mafomu akati wandei ekudyara, pasina iwe kubhadhara zvimwe zvigadzirwa.
Kubva pane ino mamiriro ese, ndeimwe yemhinduro dzinodzivirira kwazvo kusagadzikana kuri kuitiswa nemisika yemari mazuva ano. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti zvinosanganisa kwenguva pfupi zvine chekuita nechikamu chemari yakatarwa. Nechikonzero chakajeka kwazvo uye icho hachisi chimwe kunze kwekufanoonekwa kwehuwandu hwehuwandu hunosvika munzvimbo yeeuro. Neiyi nzira, imwe yekutanga mhedzisiro iyo yerudzi urwu yemari inogadzira ndeyekuti inodzivirira chengetedzo yako zvakanyanya. Mupfungwa yekuti kurasikirwa kwakanyanya kushomeka, kana kuriko.
Icho chigadzirwa chinogadziridzwa kune ese marezinesi profiles. Kubva pane ine hukasha kusvika kune yakadzivirirwa zvikuru, ine zviripo zvisina parinogumira maererano neanogona kugamuchira. Kunyangwe iri ivo vanochengetedza zvakanyanya avo vanozopedzisira vasarudza mari yakavhenganiswa yekudyara. Kunyanya nekuti inovabvumidza kusiyanisa mari yavo kana zvinhu zvakanyanya kunyatsoita. Kubva munzira dzakasiyana dzekudyara iwe dzaunogona kusarudza kune zvaunofarira. Kwete pasina, ivo vane chakasimba chakapihwa icho chakasarudzwa nemhando dzese dzemamaneja emunyika uye epasi rese.
1 Yakavhenganiswa mari: ivo vanowanzochinja
2 Zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana
3 Zadzisa kune yekudyara portfolio
4 Inotarisirwa kwenguva refu
5 Imari inodzorwa zvakanyanya
6 Nemakomisheni akasiyana siyana
Yakavhenganiswa mari: ivo vanowanzochinja
Nei idzi mhando dzemari dzingave dzinonakidza kwazvo kunyorera izvozvi? Zvakanaka ipapo, nekuti yako kuita zvinhu zvakasiyana-siyana uye kuchinja inovaita imwe yemapoka akakodzera kwazvo munharaunda yezvino yemisika yemari. Iko, equities iri kuratidza kunetsekana zviratidzo zvekushaya simba uye yakamisirwa mari haisi izvo zvayaive makore mashoma apfuura. Nenjodzi yekuti iwe unogona kusiya ma euro akawanda munzira. Kubva ino nharaunda yepasi rose, yakavhenganiswa mari yekudyara inoderedza zvakanyanya njodzi. Kunyangwe pane zvinopesana, ivo vanodzikamisa izvo zvinogona kuwanikwa iwe zvaunogona kuwana muzviitiko zvakakura zvematanho ezvehupfumi.
Chii chaunowana chaizvo kana iwe uchihaya aya mari ekudyara? Zvakanaka, chimwe chinhu chakareruka sekuvhura chinzvimbo chekudzivirira kumisika nekuti iwe urikusarudza deredza uremu hwayo muzvikwereti uye kudzikamisa nguva mune yakatarwa mari chikamu nekuda kwenjodzi dzekukwira kwemitengo. Sezvauchaona, pane zvakawanda zvakanaka izvo izvi zvinogona kukuunzira zvigadzirwa zvemari mune mamiriro akafanana neazvino. Iko, kune rumwe rutivi, iwe hauzive zvekuita nemari yako. Nekuti musika wemasheya haukugutsi uye mari yakatarwa izere nenjodzi dzakateerana dzisingafungidzirwe kusvika makore mashoma apfuura.
Zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana
Ehezve, pane chinhu chimwe chiri pachena kwazvo mune yakavhenganiswa mari yekudyara uye ndezvekuti mukati mavo, tinogona kuona nzira dzakasiyana dzinogona kushandiswa mune yekudyara nyika. Kunyangwe kubva mhando dzakanaka kwazvo izvo zvingatokushamisa iwe neyakavanzika uye yekutanga. Mune zviyero izvo zvinozo nongedzwa kuprofile iwe yaunounza sediki uye wepakati investor. Ndokunge, nenjodzi ine mwero kana kufungidzira nzira dzine hukasha. Asi mune zvese zviitiko, kusiyanisa mari, zvinova ndizvo zvinotsanangura izvi zvakakosha zvigadzirwa zvatiri kutaura nezvazvo.
Mune imwe tsinga, haugone kukanganwa kuti mari yakavhenganiswa inokubatsira iwe kupedza iyo beta uye nenjodzi mumapotifoliyo. Izvi mukuita zvinotsigirwa mune izvo huwandu hwekurasikirwa hunowanzo kudzorwa uye ivo vanowanzo kuve akanaka portfolio masanganiswa. Iko iwe pachako haufanire kuita chero chinhu, asi zvinopesana zvese zvese uchaitirwa iwe kubva kumanagement makambani ivo pachavo. Ndivanaani vari ivo vanosarudza kuti ndeipi mari yemari ndiyo inonyanya kukodzera kuita mari inobatsira mutengi kuchengetedza. Vamwe vacho vane kudzoka kwegore negore uko kunogona kusvika kusvika manhamba akapetwa. Zvirinani zvinokupa iwe kuti ufunge nezve kana kuti kwete zvakakodzera kukosha kwayo kubva ikozvino.
Zadzisa kune yekudyara portfolio
Chero zvazvingava, mari yakavhenganiswa inoenderana nekudyara kwawakagadzira kusvika zvino. Nekufumurwa kune equities, mari, zvigadzirwa, nezvimwewo. Ndokunge, iwe uchave uine yakawanda yekuchinjika kukudziridza sarudzo yawatora kana uchisarudza chimwe chezvigadzirwa zvine hunhu uhu. Ehezve, zvimwe mune mamwe echinyakare mamodheru ayo akavakirwa zvakananga pamari kana yakatarwa mari. Hazvishamisi kuti ndeimwe yemabhenefiti makuru ekubheja pane ino modhi yekudyara parizvino.
Kune rimwe divi, avo vanonzi vakasanganiswa vanozogadzira kuti iwe unogona kuva chimwe chinhu kudzikama mukutarisana nekugona kusagadzikana yemisika yemari. Sezvo zviri kuitika mumwedzi iyi uye izvo zviri kugadzira kusava nechokwadi kwechikamu chakanaka chevashambadziri. Sezvo zvingave zviri zvako wega kana iwe uchitya izvo zvinogona kuitika nenyika inogara yakaoma mari. Mupfungwa iyi, yakavhenganiswa mari yekudyara inokupa iwe yakawanda chengetedzo kupfuura iyo yese. Asi chenjera kwazvo, nekuti ivo havana njodzi. Kwete zvakati wandei, sezvaunga fanoona kubva kune idzi tsananguro.
Inotarisirwa kwenguva refu
Nezve iyo yakareba, hapana mubvunzo kuti kusanganiswa kweanoverengeka emari zvinhu zvinopa a kugadzikana kwakasimba kuwedzera kukosha kumapotifoliyo. Ehe, kushanda kwayo mune ipfupi mazwi kune mashoma pane mune mamwe marudzi emari yekudyara. Nekuti marongero avo akaomesesa kukura nekuda kweakakosha maficha eaya mamodheru kuti zviite zvako zviwanikwe purofiti. Izvi zvinoreva kuti, zvakagadzirirwa nguva yemakore mashoma ari mberi uye izvo zvinogona kukubatsira kubvisa kusagadzikana mukugadzirira kwekupinda mumisika yezvemari.
Chero zvazviri, iwe uchagara uine mukana wekutamisa yako yakavhenganiswa mari yekudyara kune mamwe manejimendi mamodheru. Chakanakira zano iri ndechekuti iwe unogona kuisa ino sisitimu nenzira isina muganho, ndiko kuti, kangani nguva yaunoda zvichienderana nezvako zvaunofarira. Nekuti ichave isina mari yemari, nekuti zvakapesana haufanire kubhadhara imwe euro mune aya mashandiro. Kwakatangira mari haina basa nekuti chinongodiwa ndechekuti mari dziiswe mubhangi rimwe chete. Uye uzvitungamire kuchikwama chaunofunga chakakodzera, chero hunhu hwako.
Imari inodzorwa zvakanyanya
Kana izvi zvigadzirwa zvemari zvichionekwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti iwe unogona kushandisa masimba akakurisa pamusoro pezviremera zvavo. Iko kupokana, asi izvi imhaka yekuti kushomeka kwayo kuri kushoma pane emari yekudyara zvichibva pamari inoshanduka kana yakatarwa. Hazvishamisi kuti kusagadzikana kwakadzikira zvakanyanya sezvo zvisingawanzoitika kuti zvine shanduko dzakanyanya. Kubva pane ino mamiriro, izvo zvigadzirwa zvinogona kutariswa seyakagadzikana. Chimwe chinhu chisingareve kuti ivo vanoregererwa kubva pakurasikirwa mumutengo wavo. Hongu kwete, sezvaungaona nekushanduka kweaya mamodheru mukutarisira mari.
Nemakomisheni akasiyana siyana
Kumwe kufungisisa kwaunofanirwa kufunga nezvako ikozvino ndekwekuti kuhaya kwako kunosanganisira kubhadharwa kwemakomisheni akati wandei. Sezvo nemari yasara yekudyara, kunyangwe zvakadaro zvinoshamisa kwazvo kuti vanodarika 1,50% pamari yakachengetwa. Makomisheni ezvigadzirwa zvemari izvi zvinoenderana neakatorwa pakutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Uye yakawandisa kupfuura mukutsinhana-kutengesa mari izvo zviri nani kuzivikanwa se ETFs. Mupfungwa iyi, hapazove nemusiyano wakakosha zvine chekuita nedzimwe nzira dzekudyara.
Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti ivo vanorangwa nekuda kwavo mutero kurapwa. Izvi zvinonyatso kureva kuti kana iwe uchidzosera yako yemari zvipo nemari yavo inoenderana, mitero ichabviswa. Ndokunge, kudzoka kwakanyanya hakuzoenda kuaccount account yako. Naizvozvo, zano rako rakanakisa rakavakirwa pakuchengeta mari yakavhenganiswa kwenguva yakareba kuti uyedze kubhadhara mutero uyu.
Kubva pane ino maonero, hachisi chimwe chezvinhu zvinokurudzirwa zvigadzirwa, asi zvinoshandurwa kune chaiwo maprofayiri ekugamuchira. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yedzimwe sarudzo dzauinadzo panguva ino kuita kuti kuchengetedza kwacho kubatsire. Kunyangwe ichibva kune yakasarudzika nzira kupfuura kubva kune mamwe matanho aunayo pamberi pako. Nemhando dzakasiyana siyana dzemhando dzinozoenderana nechero rema profiles evashambadzi vadiki nepakati. Kunze kwehumwe hunyanzvi uye pamwe kunyangwe kufunga kwakakosha. Kubva ikozvino zvichienda mberi iwe uchafanirwa chete kuongorora kuti kana kwete zvakanyatso kukodzera kuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Mari » Sei mari yakavhenganiswa ichigona kuve imwe nzira yekudyara?
Ndeapi ari masimba esimba rehupfumi?